Izihloko zebhuku lezinganekwane ezi-5 ezithengiswa kakhulu | Izincwadi Zamanje
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Amabhuku
Izihloko eziqanjiwe ezi-5 ezithengiswa kakhulu
Ngemuva kohlu lwe izincwadi ezithengisa kakhulu okungeyona inganekwane, namhlanje sihamba ne- eqanjiwe. Abanye Iziqu ezingama-5 ezihola imakethe yamanje. Ayiphumi emsamo UFernando Aramburu kanye nalo Patria. Izicingo kanye neZafón zihlala njengenjwayelo phakathi kwezintandokazi. Cabanga kabusha ngempumelelo ye- @ BetaCoqueta, noma Elisabet benavent. Futhi iprozi yezinkondlo yeVigo UGomez Iglesias.
Ngiyabonga futhi ngokuxhumana kwami ​​nemibhalo ngaphandle kwerekhodi, ku-qt futhi kakhulu… thula du. Siyabuyekeza.
1.1 Izwe - UFernando Aramburu
1.2 Imigwaqo engu-1775 - Ukunikezwa kukaJosé A. Gómez Iglesias
1.3 Inkosi yamathunzi - uJavier Cercas
1.4 Umlingo wokuba nguSofía (Bilogy Sofía 1) - Elísabet Benavent
1.5 ILabyrinth of Spirits - uCarlos Ruiz Zafón
Patria - UFernando Aramburu
Lobu bufakazi bokucabanga ngeminyaka engaphezu kwengu-30 yokuphila ezweni laseBasque ngaphansi kobuphekula buqhubeka phezulu. Akungabazeki ukuthi ibalulekile hhayi kuphela ngenxa yokukhokhiswa okungokomzwelo kwendaba (leyo ebalalayo futhi engeyabo bonke abantu), kodwa futhi nangenxa yesimo samanje esiphila kuso.
Isinqumo sowesifazane, uBittori, sokubuyela endlini lapho ayehlala khona nomyeni wakhe, ebulewe yi-ETA, sithola kabusha ukuthula okungamanga kwabantu bakubo. Ukungqubuzana okukhethekile futhi okomuntu siqu phakathi kukaBittori nomakhelwane wakhe kanye nomngani wakhe wangaphambili uMiren kukhombisa imizwa ejulile futhi ephikisana kakhulu esaqhubeka ngokujwayelekile. Futhi yonke indaba isitshela nge kungenzeki ukukhohlwa kanye nesidingo sokuxolelwa lokho kusakufihla ukushisekela ngokweqile kwezepolitiki.
Imigwaqo engu-1775 - Ukunikela uJosé A. Gómez Iglesias
Ukunikela uJosé A. Gómez Iglesias ungumfana waseVigo othandweni lokuhamba, izitimela nokubhala kunoma iyiphi indawo engenalutho. Futhi yilokho akwenza ngelinye ilanga cishe ngaphandle kokucabanga. Ngokuxhumana nomphakathi waqala ukubhala ngemicabango yakhe, izifiso kanye nokuhlangenwe nakho kwanamuhla, izolo nakusasa. Njengoba ilula njengoba injalo ngqo, okuyilokho okudingwa ulimi lokuxhumana nabantu. Kulezo zimo ezikhethekile empilweni yanoma ngubani, wengeza umcabango ophuphumayo.
Umphumela: a ukuhlanganiswa kwezinkondlo neprose, noma iprozi ngenkondlo ukuveza imizwa kalula. Futhi kukhona. Endaweni yesibili.
Inkosi yamathunzi - UJavier Cercas
Sekudlule iminyaka engaphezu kwengu-15 selokhu kwashicilelwa i- Amasosha aseSalami futhi uJavier Cercas ubuyela eMpini Yombango. Le noveli ngu obuseduze kakhulu nobomuntu siqu, futhi ungena esikhathini esidlule esingakhululekile somndeni wakho.
I-Akhawunti ukufunwa kwendlela elahlekile yomfana cishe ongaziwa owalwela injongo engenabulungiswa futhi wafa ohlangothini olungafanele. Igama lakhe kwakunguManuel Mena kwathi ngo-1936 wajoyina ibutho likaFranco. Eminyakeni emibili kamuva washona eMpini ye-Ebro, futhi amashumi eminyaka waba yiqhawe elisemthethweni lomndeni wakhe. Kwakunguye umalume omkhulu nguJavier Cercas, owayehlala enqaba ukubuza ngomlando wakhe, waze wazizwa ephoqelekile ukwenza njalo.
Umlingo wokuba nguSofia (Bilogy Sofía 1) - Elísabet Benavent
Ngemuva kwempumelelo enkulu yezincwadi zakhe zangaphambilini, u-Elísabet Benavent, owaziwa nangokuthi @BetaFlirty, ubuye ne ingxenye yokuqala yebhayoloji lokho kusitshela, ngokusha nangamahlaya, ukuthi kwenzekani lapho abantu ababili besindwa ubunzima bezimo behlangana futhi bethola ukuthi umlingo ukhona kuphela lapho bebukana emehlweni omunye nomunye.
I-labyrinth yemimoya - UCarlos Ruiz Zafon
El i-denouement yesaga ye Isithunzi somoya namanje ungaphumi kule podium, yize isikhathi sesivele sidlulile selokhu yashicilelwa.
UDaniel Sempere, umkakhe uBeatriz, umngani wakhe othembekile uFermín, uMathuna Wezincwadi Ezikhohliwe ... Amagama ayizethenjwa avela ochungechungeni oluphumelele kakhulu emashumini eminyaka amuva nje, manje ajoyinwa ngu-Alicia Gris, umphefumulo owazalwa ngamathunzi empi, ukuwaholela enhliziyweni yobumnyama nokuveza umlando oyimfihlo womndeni, yize ubiza kabi.
Okungcono kakhulu ekunambithekeni kwami ​​kwalolu chungechunge lonke yi- inkokhiso kukonke okwenziwa uZafón emhlabeni wezincwadi, kubuciko bokuxoxa izindaba kanye nakuyinyunyana cishe yomlingo phakathi kwezincwadi nempilo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Izihloko zezincwadi eziqanjiwe ezi-5
ngifuna izincwadi eziqanjiwe kusho
Zibukeka njengezihloko ezinhle, okungangikholisanga ukuthi zingabathengisi abahamba phambili ngokususelwa kubani noma ini
Phendula ekusesheni izincwadi zamanga
I-Pulp, inoveli yokugcina uBukowski asinike yona